ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 10 တစ် Bodacious Bachelorette Pad ဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများ!
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 12 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
"အိမ်နှင့်တူစရာမလိုပါပဲ။ "—Oz ၏ Wizard ကို
သင်ချိန်းတွေ့ကြပဲဖြစ်ဖြစ် အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း, ခရီးဝေး, သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်စွာရုံးခန်းတစ်ခုအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ကြသည်, သင်၏မေတ္တာဇာတ်လမ်းများအတွက်နောက်ဆုံးတွင် "setting ကို" သင်တို့၏နေရာတွင်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်.
ကတူသို့မဟုတ်မ, သင့်ရဲ့တိုက်ခန်းကို, နေအိမ်, သို့မဟုတ် shack, တစ်ဦးသင်မည်သူတွေအကြောင်းအများကြီးနဲ့သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုပြောပါတယ်. ကိုယ့်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်တူ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်း volumes ကိုဆက်သွယ်.
သင်တို့အဘို့သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ဘာပြောသလဲ?
သင်သည်သင်၏ဥစ္စာကိုသင်မင်္ဂလာဆောင်ပစ္စည်းင်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင်, အတူထွက်ဆွဲထားနှင့် ပို. သိကျွမ်းရတဲ့ကိုခံထိုက်သောသူသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်စုံတစ်ဦး, အဲဒီအချိန်မီအကြံပြုချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား.
1. သင်၏ကိုယ်စားထူးခြားတဲ့စေပါနဲ့, သင်မည်သူ၏စိတ်ဝင်စားဖို့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု.
က whimsical င်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဟောင်းနွမ်းခေတ်မ, ရဲရင့်ခြင်းနှင့် bodacious သို့မဟုတ်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှည့်ကအပေါ်ကိုတင်.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစက်အပြောက်ရှိခြင်း၏ဂုဏ်အသရေင်: သင့်ရဲ့အာကာသ, သင့်ရဲ့အရသာ!
သင်နှင့်အတူတက် လာ. နိုင်အဘယ်အရာကိုမြင်. ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ, စတိုင်များ, Texture, နှင့်ပင်အချိန်ကာလကို. ကနဦးအဆင့်များတွင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကိုက်ညီဆုံးအရာ၏ရရှိလာတဲ့အထိငွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမ.
တချို့အရောင်သင်ကအထူးသဖြင့်အခန်းသို့မဟုတ် setting ကိုအတွက်ခံစားရနှင့်စဉ်းစားဘယ်လိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ပါ? ဥပမာအားဖြင့်, Beige နှင့်မြေကြီးကိုလေသံအရောင်များကိုအေးဆေးနေကြတယ်; အနီရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်နဲ့တူအရောင်များကို invigorating နေစဉ်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအချို့နှစ်သက်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုထုတ်လုပ်အရောင်ကုထုံးရှိသမျှတို့သည်အချိန်ကိုအသုံးပြုပါ. သင်လည်းသင့်သည်ဟုမ.
4. ကောင်းတဲ့သပ်သပ်ရပ်ရပ်သင့်ရပ်ကွက်များတွင် Keep.
သင့်ရဲ့ mom, မှန်ခဲ့သည်. မသာဒီအလေ့အကျင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူနှစ်သက်စရာဖန်တီးအထောက်အကူပြုပါဘူး, တာရှည်လမ်းကိုသင်အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာသို့ဝင်.
5. "သင်စိုက်သောင့်ဘယ်မှာ Bloom ။ "
အိမ်တွင်းသဘာဝနည်းနည်းရှိမယ်အမြဲတမ်းစမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါသည်. အပင်နွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်တစ်ဦးလေထုကိုဖန်တီးဖို့. သူတို့ကလည်းကောင်းလေထုအရည်အသွေးများကိုကူညီ. သင်က "စိမ်းလန်းသောလက်မနှင့်အတူမွေးဖွားလာမခံရရင်တောင်,သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များထက်စော်ကားမှု "" လျော့နည်းလိုအပ်အပင်အမျိုးမျိုးရှိပါသည် ". Clueless? Google က "လွယ်ကူတဲ့ကြီးထွားလာပင်များ" သို့မဟုတ်အကူအညီအတွက်သင့်ဒေသခံ Home Depot ရဲ့ဥယျာဉ်ဦးစီးဌာနမှသွားရောက်ကြည့်ရှု.
ငါသည်အခြင်းတောင်းကိုချစ်မြတ်နိုး! သင်လည်းလိမ့်မည်. သူတို့ကစျေးသိပ်မကြီးတဲ့င်, ဆွဲဆောင်မှု, နှင့်အလွယ်တကူရှာ.
သိုလှောင်မှုအဘို့ထိုသူတို့ကိုသုံးပါ: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကလေးကစားစရာကျင်းပရန်, မျက်နှာသုတ်ပဝါ, CD များ, အရသာလက်ဖက်ရည်, သို့မဟုတ်နံရံတွင်ဗျူဟာမြောက်နေရာချအလှဆင်အနုပညာကိုအပိုင်းပိုင်းအဖြစ်. ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီ, အမြင့်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အရွယ်အစားများနှင့်ရက်ပုံစံများ.
သင်ကဂီတကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်, တကဂစ်တာသို့မဟုတ်ဗုံဖြစ်နိုင်. ဒါဟာတော်တော်လေးဖြစ်နိုင်, အလှဆင် frames များကိုသင့်မိသားစုသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ "အိမ်" ဓါတ်ပုံက. သငျသညျခရီးမှချစ်ကြလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်သည်ဝေးသောနေရာအရပ် images နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့မဟုတ်နှစ်ခုပြသနိုင်. ဤ Add, အချို့သော scented ဖယောင်းတိုင်, တစ်ခုသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစမ်းရေတွင်း၌,anice ပြီး touch နဲ့များအတွက်.
များစွာသောစုံတွဲများအစားအစာ sharing အချိန်မှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ဖြုန်းဘယ်မှာင်, ပျော်စရာ, နှင့်ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်ဖန်တီး.
9. အကောင်းဆုံးကိုအပေးအယူအဘို့အကွင်း၏ Array ကိုမှာဆိုင်တစ်ဆိုင်.
သင်သည်သင်၏ဒေသခံမိသားစုဒေါ်လာတို့လိုနေရာတွေကိုတချို့ကြီးမြတ်ပစ္စည်းများဂိုးသွင်းနိုင်, အရည်အသွေးပြည့်ခုကိုစတိုးဆိုင်များ, အိမ်ခြံမြေအရောင်းနှင့်စျေးကွက်များခွေးလှေး, ပင် Craigslist.
ဒါဟာ 'သင်အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းဟာကြီးမြတ်သဘောမျိုးကိုပေးမည်, အနာဂတ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအဘို့နှင့်အသုံးဝင်သောစိတ်ကူးများ.
သင်မှား Partners ရွေးချယ်ရတာနေကြ?